पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको देब्रे स्त’नमा दाँतले टो’केको डो’ब भेटियो ! - Mitho Khabar
February 12, 2020 February 12, 2020 mithokhabarLeaveaComment on पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको देब्रे स्त’नमा दाँतले टो’केको डो’ब भेटियो !
काठमान्डौ ,का’मदारमा महिला अं’गप्रतिकाे आ’शक्ति- प्रहरी स्रोतका अनुसार यो हो सानेपामा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको ह’त्याको कारण। सोमबार बिहान पूर्वसचिव कार्की पशुपतिनाथ जान्छु भनी घरबाट नि’स्किएका थिए। फ’र्किंदा पत्नी मुना र’गताम्य भएर भान्सामा ढ’लेकी थिइन् भने का’मदार विजय चौधरी अर्कातिर ल’मतन्न परेका थिए। सीसीटीभी फुटेजअनुसार विजयले मुनालाई प्ला’स्टिकको पि’र्काले टाउकामा आ’क्रमण गर्नुअघि फ्लो’रमा प’र्खिएर बसेका थिए। विजयले मुनालाई केही भन्न खोजेको र मुनाले केही अ’स्वीकार गरेजस्तो हा’उभाउ फुटेजबाट बुझिन्छ।
विजयको अ’न्डरवेयरभित्र वी’र्य स्ख’लित छ भने र’गतको डा’म पनि छ। मुना म’हिनावारी भएको देखिन्छ। मुनाको टाउको र गालामा ग’हिरो चो’ट छ भने आँखामा नी’लडाम छ। विजयको भने हातमा चो’ट र अन्डरवेयरमा फो’होर भेटिएको अनुसन्धानरत प्रहरीले जनाएको छ। मुनाको श’व अध्ययन गर्दा उनको देब्रे स्तनमा दाँतको डा’म रहेको अनुसन्धानकर्मी प्रहरीले बताए, आज माघ २९ गतेकाे जनआस्था साप्ताहिकले लेखेको छ। प्रहरीको अ’नुमानअनुसार म’हिनावारीका कारण मुनाको शरीर शि’थिल थियो ।त्यस्तो अवस्थामा विजयले उनको अं’गमाथि अनुचित व्य’वहार गर्न खोज्दा केही न केही अ’समझदारी भएको हुनुपर्छ।
त्यही अ’समझदारीको आ’वेशमा विजयले उनको ह’त्या गरे। अनुसन्धान क्रममा प्रहरीले छ’रछिमेक र आ’फन्तहरूसँग सो’धपुछ गर्दा मुना र पति अर्जुन र पति अर्जुनबीच अ’सझदारी ब’ढेको पाएको थियो। तर सोमबारको घ’टनामा अर्जुनको उपस्थिति थिएन। उनी सधैं बिहानै उठेर घरबाट निस्कने, खाना खान जाने र दिउँसो फेरि निस्कने गर्थे।